ko htike's prosaic collection: ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ပိုင်ဆိုင်မှု စာရင်းများ တင်ပြရန် တောင်းဆိုမည့် သတင်းကြောင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေ
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ပိုင်ဆိုင်မှု စာရင်းများ တင်ပြရန် တောင်းဆိုမည့် သတင်းကြောင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေ
၂၀၁၀မှာစစ်အစိုးရရဲ့ တဖက်သက် စိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲအတည်ပြုထားတဲ့ နာဂစ် အခြေခံဥပဒေအရ ပြုလုပ်မဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်အရွေးခံကြမဲ့ အမတ်လောင်းတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းကို တင်ပြကြရမယ်ဆိုတဲ့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအပါအဝင် ဝန်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီးများ ဌာနဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ မသမာတဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံကြောင့် ချမ်းသာလာကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိလောက်အောင် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေကြပါတယ်။
လက်ရှိ စစ်အဏာသိမ်း အစိုးရထဲက လါဘ်ငွေအနည်းဆုံးရတဲ့ သိပ်မချမ်းသာသေးတဲ့ တယောက်ယောက်ကများ ဒီကိစ္စကို အစဆွဲထုတ်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် တပ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေက စာရင်း ကင်းလွတ်ခွင့်မှာ သူ့ကိုယ့် သူထည့်သွင်းထားပြီး ကိုယ်လွတ်ရုန်းဘို့ စီစဉ်ထားတာကြောင့်လား။ (သန့်ရှင်းလွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို သူက ကျင်းပပေးမယ်လို့ ကမ္ဘာသိ ပြောဆိုထားတာကြောင့် တပ်ချုပ်ကြီးက ဒီလိုကင်းလွတ်ခွင့်ကို လက်မခံဘဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ပြီး သူ့မိသားစုရဲ့ ခိုးဝှက်၊ လုယက်၊ အနုကြမ်းစီး၊ ဓါးပြတိုက်ရာက ရလာတဲ့ကြွယ် ဝချမ်းသာမှုစာရင်းကို မချွင်းမချန်ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က တဆင့် မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးကို အသိ ပေးလိမ့်မယ်လို့ ကောလဟာလ သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။)
စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ် ကျင့်သုံးနေကြတဲ့ ပြည်သူလူထုက လွတ်လပ်စွာရွေး ကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့ အစိုးရတိုင်းဟာ မိမိတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ ပြည်သူလူထုကို ကြေငြာတင်ပြရဲပါတယ်။ ဒီလိုအလေ့အထတွေကို မြန်မာ စစ်အာဏာရှင်ကြီးများ ဂါဝရတရားအပြည့်ရိုသေ ကိုင်းရှိုင်းအလေးထားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင် စတင်ကြင့်သုံးနေပါပြီ။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့မှာလည်း ဒီလို ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို သတ္တိရှိရှိ ပြည်သူလူထုကို ကြေငြာတင်ပြနေကြတာ ဆယ်စုနှစ် (၂) နှစ်ရှိနေပါပြီ။ ဒီမို ကရေစီစနစ် ခိုင်မာနေပြီဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံ အတော်များများမှာတော့ ဒီအလေ့အကျင့်က အဆန်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်စရာမလိုဘဲ တိုက်ရိုက်ခန့်ထားခံကြရမဲ့ သမတ၊ ဒုသမတတွေ၊ ကာကွယ်ရေးဦစီး ချုပ်တွေရော၊ ပိုင်ဆိုင်မှု စာရင်း တင်ပြခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိနေတယ်လို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်း) စာရင်းကို ပြည်သူတွေ သိထားသင့်ပါတယ်။ (ဒီစာရင်းကို ၎င်းတို့နဲ့ နီးစပ်တဲ့ စစ်အရာရှိကြီး တဦးမှ ခန့်မှန်း ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ။ ။ သားသမီး(၈)ယောက်ရှိပါတယ်။ တယောက်ကိုအနည်းဆုံး အမေရိကန်ဒေါ် လာ(၁၀)သန်းခန့် ချမ်းသာနေကြပါတယ်။ မိသားစု(၁၀)ယောက်ဆိုတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၁၀၀)ခန့်ရှိနေပါတယ်။ ဥပမာ…..ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ် မာလာဆောင်ရှေ့ရှိ ကမာရွတ်မယကရုံးဝင်း ကြီးကို သမီးအလတ်ဖြစ်တဲ့ မပြုံး(ခ)ပြုံးပြုံးရွှေကို နာမည်လွှဲပေးခဲ့ပါတယ်။ ကာလပေါက်ဈေးမြန်မာကျပ်ငွေ သိန်းပေါင်းတစ်သိန်းခန့် ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀သန်းခန့် ) တန်ကြေးရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် IBC အဆောက် အဦးဘေးရှိ အစိုးရပိုင် ကန်သာယာဆေးရုံဝင်းနဲ့ အခြားအင်းယားကန်ဘေးရှိ တပ်မတော်ပိုင်မြေကွက်များ ကိုလည်းသမီး မသြ(ခ)ကြည်ကြည်ရွှေ နာမည်ပေါက်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့ရပါတယ်။ Myanmar Infotech ရုံးဖွင့်ထားတဲ့ပြည်လမ်းကခြံကို သားလတ်ဖြစ်တဲ့ ထွန်းနိုင်ရွှေ ( စွန့်လွှတ်ဟန်ဆောင် ထားသူ ) ကပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး။ ။သမီးတစ်ဦး မွေးစားထားပေမဲ့ တူ၊ တူမတွေ အလွန်များလှပါတယ်။ ဒီမိသားစုတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း(၁၀၀)ထက် မလျော့ပါဘူး။ သမီး ဖြစ်သူ နန္ဒာအေး ဟာ၊ Queen Star ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး Computer နဲ့ IT ပစ္စည်းများကို လိုင်စင်မဲ့ အခွန်မဲ့ တင်သွင်းခွင့် ရရှိထားတာကြောင့် တနှစ်ကို ဒေါ်လာသန်း(၂၀)ခန့် အမြတ်အစွန်း ရရှိနေသူတဦးပါ။ ဒါအပြင် နန္ဒာအေးဟာ ဦးအောင်သောင်းရဲ့ သားဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူး ပြည်အောင်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တဲ့အတွက် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုတော့ တွက်ချက်လို့ မရနိုင်အောင်ပါဘဲ။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း။ ။ သား(၂)ယောက်ရှိပါတယ်။ အကြီးဖြစ်တဲ့ တိုးအောင်မန်းဟာ ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေ ရဲ့သမီးနဲ့ လက်ထပ်ယူထားပြီး စီးပွားရေး သောင်းကျန်းမှုမှာတော့ ထိပ်ခေါင်စာရင်းဝင်ပါဘဲ။ နိုင်ငံတော်ပိုင် ကရဝိတ်ဟိုတယ်နဲ့ မြရိပ်ညို ဟိုတယ်တွေကို နိုင်ငံတော် အမည်ကနေ ကိုယ်ပိုင်အမည် ပြောင်းလဲပိုင်ဆိုင်ထား ပါတယ်။ အငယ်ဖြစ်သူ အောင်သက်မန်းကတော့ ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ် တေဇနဲ့ ထူးကုမ္ပဏီမှာ အတူတကွ ပူး ပေါင်းပြီး သံယံဇာတ အားလုံးကို သိမ်းကျုံး ရယူ ရောင်းစားနေသူတဦးပါ။ ကြွယ်ဝမှုတွေကတော့ အဲ့ဒီ့မိသားစု တွေမှာ ခန့်မှန်း အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၁၀၀၀) ခန့်ရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီး ဒုဝန်ကြီး တိုင်းမှူးနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ အရေအတွက်ဟာ (၃၀၀) ခန့်ရှိပါတယ်။ ပျမ်းမျှတစ်ဦးလျှင် ဒေါ်လာ(၁၀)သန်းနဲ့တွက်ပါက စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း (၃၀၀၀)ခန့်ရှိပါတယ်။ အဲဒီငွေပမာဏနဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို (၂၄)နာရီ မီးလင်းအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ လမ်းတွေပြင်လို့ရပါတယ်။ ဆေးရုံတွေပြင်လို့ရပါတယ်။ စာသင်ကျောင်းတွေ ပြင်ဆင် တိုးချဲ့ဆောက်လုပ် နိုင်ပါတယ်။
ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ရှာဖွေထားတာမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံပိုင်ငွေကြေးတွေကို မတရားတဲ့နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီး လိမ်လည်ရယူထားတာကြောင့် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းကို တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူ ထုထံကြေငြာတင်ပြရန် အထူး ကြောက်ရွံ့နေကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါတယ်။
Wealthy Generals afraid to declare their asset
and property in coming election.
News on the grapevine cause big shock for rich Generals, Ministers and Deputy Ministers in junta as rumor said everyone plan to participate in coming election are to declare their personal and family’s assets and properties. Corrupted junta’s members suspect some of not very wealthy jealous fellow member instigate that issue to provoke the riches.
We all understand that every democratically elected government in good intention for People and State must dare to practice in declaring their assets and properties with clear conscience. Such was even introduced and practice in People Republic of China and neighboring countries were matured in that system for more than two decades. Actually that system is notapeculiar butaroutine practice in many countries of the world.
Now in Burma, only for the candidates intended to participate in election are eligible for declaring their assets and properties so according to illegitimate constitution drawn by junta that President, Vice President and Commander in Chief of Army are not necessary to be the elected members of People’s Assembly and they are excluded or exempted to declare their assets and properties.
We roughly learnt the assets and properties of junta’s members which are obviously can see by general public (but excluding of jewelries and foreign currencies in other countries banks) and following are some excerpts;
(1) Senior General Than Shwe and family.
General Than Shwe has eight sons and daughters. Each one of them is rich in the amount of not less than US$ 10 millions. So for their family of ten members are roughly rich in amount of US$ 100 millions. Some example for our calculation is that one of the General Than Shwe’s daughters Ma Pyone took free of charge for2acres plot of Kamayut Township administration office own by Ministry of Home Affairs in Pyay Road in front of old Rangoon University. That compound worth more than US$ 10 millions. They also took the State own former Kan-Thar-Yar hospital on the bank of Inya lake next to IBC building and many others State and army own plots and compounds around in the area of Inya lake without paying any single cent but all in free of charge. Office of Myanmar InfoTech in Pyay road is also own by Tun Naing Shwe, son of U Than Shwe.
(2) General Maung Aye and family.
He has only one daughter but an army of nephews and nieces are sharing the advantages of opportunities thus all his own assets could reach to US$ 100 millions easily. His daughter Nandar Aye own Queen Star company, which is importing computers, accessories and IT related goods without permit and import duty so benefit is definite that they can make US$ 20 millions profit annually. Nandar Aye also married to Lieutenant Commander Pye Aung, son of Myanmar’s notorious Ali Barber U Aung Thaung so their wealth is uncountable.
(3) General Thura Shwe Mann and family.
He has two sons. Elder son Toe Aung Mann married to daughter of Zay Kabar Khin Shwe. State own properties of Karaweik Palace and Mya-Yeik-Nyo hotel are already change the ownership to them with payment for free of charge. Younger son Aung Thet Mann is associated with notorious Tayza, the most hated creature in the country by people, and running Htoo Company, which is grabbing all State own forest and all resources thus their family assets exceeding the amount of over the US$ 1000 millions.
All that money in the hands of junta’s family are never been earned by their legal income but all are stealing from the State coffer.
Posted by ကိုထိုက် at 09:16
Thanksalot for your sharing new. Let's wait n see how will be later!
They will find the way!!!
The most stupid top group wicket leader will do and find the way!
29 October 2009 at 12:33
ျကိုယ့်အမေကိုယ်ပြန် လိုး...နေတဲ့ကောင်တွေ၊maung ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ simpleဆိုတဲ့ကောင်တွေ၊ငါလိုးမသားတွေ
တော်တွေ မစော်ကားဘူး၊မင်းတို့ အဖေတွေက သံဃာ
တော်တွေကိုသတ်တာ မင်းတို့ ဘာပြောမလဲ၊မင်းတို့ ကြည့်ရတာ အခြောက်တွေများလား၊စစ်တပ်ကချထားတာ
မင်းတို့ ဖင်ထဲ လီး ဘယ်လောက်အရှည်ဝင်နေပလဲ
သေချာလဲပြန်စမ်းကြည့်ကြဦး၊ဒီလောက်တောင် ဖင်ခံနေရတဲ့ဘ၀မှာ ပျော်နေ ကျေနပ်နေရင် နာမည်ရင်းဘယ်သူလဲ ဘယ်မှာနေလဲ သေချာရေးထဲ့ပေးစမ်းပါကွာ လာချပေးမယ် လီးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး မင်းတို့ ဖင်တွေကိုရွံတယ်
မင်းတို့ ကိုယ် မင်းတို့ မှန်တယ် သတ်တိရှိတယ်ထင်
ရင်ပေါ့ ၊ငါက ဒေါ်စု နောက်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့ သံဃာတောင်ပြန်သတ်ရဲတဲ့ မင်းတို့ စစ်တပ်ထဲ
က ဘယ်သူနဲ့ ယှဉ်ယှဉ် ဒေါ်စုကိုလေးစားလို့ ရတယ်
မင်းတို့ ရေးထားတာမှန်ရင် ၁၉၉၀ တုံးက ပြည်သူက
ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မဲပေးခဲ့လဲ၊မင်းတို့ လဲ အဲတုံးကဘာတွေပြောဘယ်လိုပါခဲ့ကြလဲ၊ဒေါ်စုဘာဖြစ်
ဖြစ်ပြည်သူ့ အဆုံးအဖြတ်ကအဓိကပဲ၊ထပ်ဆဲ ဦးမယ်
ရေးရင်း စိတ်တိုလာပြီ၊ငါ လိုးမသားတွေ...မင်းတို့ လဲ သိခဲ့တဲ့ သေခဲ့ရတဲ့ အပြစ်မဲ့ကျောင်းသားတွေ
ခုချိန်ထိ ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ပြည်သူတွေ အတွက် မင်း
တို့ဘာပြောမလဲ..သူတို့ (မင်းတို့ ပ့့ထွေးတွေ)ကျတော့ နှိုင်းယှဉ်မရအောင်ချမ်းသာနေတာ
မြင်လား သိလား ခွေးလိုးမသားတွေရဲ့
21 July 2010 at 04:04